केटीहरुको यी अंगमा पुग्छ पुरुषको पहिलो छड्के नजर – Halkhabar kura
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०२:३२
केटीहरुको यी अंगमा पुग्छ पुरुषको पहिलो छड्के नजर
महिलाले पुरुषलाई हेर्ने नजर र पुरुषले महिलालाई हेर्ने नजरमा आकाश जमिनको फरक छ । जब एक पुरुषको एक महिलाको जम्काभेट हुन्छ उसको पहिलो नजर महिलाको कुन अंगमा पर्छ होा ? यो कुरामा कसैले पनि ठ्याक्कै अनुमान लगाउन सक्दैनन् । यो विषयमा धेरै महिलाको अनुमान गलत साबित भईदिन्छ । धेरैले महिलाको छाति भन्ने जवाफ दिन्छन् । तर त्यो सत्य भने होइन ।
Previous ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखियो !
Next उखुको रकम किसानलाई भुक्तानी नगर्ने मिल संचालक मनोज अग्रवाल पक्राउ